R/wasaare Saacid oo sheegay in Xukuumaddu diyaarisay qorshe lagu xasilinayo magaalada Kismaayo
Ra'iisul-wasaaraha Xukuumadda Soomaliya Cabdi Farax Shirdoon ‘’Saacid’’ ayaa Sheegay in dowlada Soomaliya ay diyaarisay qorshihii xasilinta magaalada Kismaayo islamarkana ay dhawaan gaari doonaan wafdi loogu talagalay inay ka shaqeeyaan howlaha xasilinteeda.
R/wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon ‘’Saacid’’ ayaa ka hadlay siyaasadda dowladda ee dhinaca amniga iyo arrimo kale, isagoo sheegay in dhawaan la hirgalin doono dhameystirka agabka ciidammada Qalabka Sida, isla markaana dib loo howlgalin doono xeryihii ciidammada, si guul looga gaaro horumarrinta, tayada Ciidammada Qalabka Sida.
Sidoo kale Ra’iisul wasaare Saacid ayaa hambalyo u diray ciidamada dowladda Federaalka ee howlgalka ka wada gobollada dalka ee cadowga ka ilaalinaya shacbiga, waxa uu sidoo bogaadiyay Ciidammada ammaanka dowladda ee magaalada Kismaayo, dowladda Soomaaliyeedna ay isu diyaarneyso xasilinta magaaladaasi, wefdi ka socda dowladda Soomaaliyana uu ku sii jeedo si xal kama dambeys ah looga gaaro halkaasi.
Dhinaca kale Ra’iisul wasaaraha Jamhuuriyadda ayaa aad u amaanay Culuma’udiinka Ahlu Sunna Waljameeca ee dadaalka ku bixiyay ilaalinta iyo Difaaca dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada dhexe ee dalka, sidoo kalena gobollada dhexa laftigooda ay u diri doonaan wefdi wasiirro ah si ay uga soo tala bixiyaan sida loo ciribtiri karo kooxaha xagjirnimada ku foggaatay iyo howlo kale.
Xukuumadda Ra’iisul wasaare Saacid ayaa ku dadaaleysa in ay ku guuleysato xasilinta amniga, horumarrinta dalka iyo dib u tayeynta ciidammada Qalabka Sida.